Home > အာရှအိုလံပစ်ကောင်စီ
၁၉၄၈ခုနှစ်၊ (၁၄)ကြိမ်မြောက် လန်ဒန်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အချို့ အားကစားခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြရာမှ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ (ASIAN GAMES) ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ (၁၃.၂.၁၉၄၉) ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့မှ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ (AGF) ၏ဆောင်ပုဒ်ကို “ Ever Onward အစဉ်အမြဲရှေ့သို့ချီ” ဟူ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကို (၄)နှစ်လျှင်တကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမအကြိမ်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် ၁၉၅၁ခုနှစ်၊ မတ်လမှ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၅၄ခုနှစ်၊မေလ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊မနီလာမြို့၌ကျင်းပခဲ့ပြီး(၁၆)ကြိမ်မြောက်၊ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အာရှအားကစားအဖွဲ့ချုပ် (AGF)မှ အာရှအိုလံပစ်ကောင်စီ (Olympic Council of Asia - OCA) ကိုပြောင်း လဲသတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းရန် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး၊ (၅.၁၂.၁၉၈၂)ရက်နေ့ နယူးဒေလီမြို့တွင် တရား၀င် ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။ အဓိက ရည်မှန်းချက် မှာ အာရှတိုက် အတွင်းရှိ လူငယ်များအတွင် အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ပညာရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖြစ်သည်။
OCA - အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ
(၁) အရှေ့အာရှနိုင်ငံများ (East Asia) - (၈)နိုင်ငံ
(၂) အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ (South East Asia) - (၁၁)နိုင်ငံ
(၃) တာင်အာရှနိုင်ငံ (South Asia) - (၈)နိုင်ငံ
(၄) အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ (Cental Asia) - (၅) နိုင်ငံ
(၅) အနောက်အာရှနိုင်ငံများ (West Asia) - (၁၃)နိုင်ငံ
စုစုပေါင်း - (၄၅) နိုင်ငံ
Asian Sport Federation - (36) Federation
1. Amateur Swimming
7. Amateur Boxing
14. Pacific Golf
19. Amateur Kabaddii
Source URL: http://www.spedmyanmar.com/content/%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AE